Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu ye-IPTT-DD | IHoodland
IPTT-DD Series Electric ophakamisa
● UMax Thrust: 2000 N.
● Isivinini esikhulu: 12 mm / s
Incazelo YomkhiqizoI-IPTT-DD Series Electric Lifters, compact amd powerful (2000N Push), enezingxenye ezi-3 zokuphakamisa ikholomu kuze kufike ku-400mm stroke, ziklanywe ngokuqinile. Kulula ukukhweza futhi kulungele ukulungiswa kokuphakama emabhentshini okusebenzela, eziteshini zokusebenza, emadeskini nasemakhishini.
I-IPTT-DD Series Electric Lifters, i-compact amd enamandla, ingafinyelela ku-800N donsa / i-push, elingana nezinto ezingama-80kg (cishe ama-176lbs).
Ngengxenye engu-3 yokuphakamisa ikholomu efinyelela ku-400mm stroke, yakhelwe ngokuqinile.
Amadivayisi wethu akhiqiza umsindo omncane futhi ngeke kube ukuphazamiseka kozakwenu noma kulabo ohlala nabo endlini. Lokhu kuyinzuzo eyisisekelo kepha ukuthola ophakamisa kusho ukuthi uzoba nesikhala esithe xaxa. Noma ngabe kungezinto zokuhamba, ukuba negumbi eliningi lokuqondisa amathuluzi.
Ophakamisa ugesi, okulula ukukhweza futhi okulungele ukulungiswa kokuphakama emabhentshini omsebenzi, eziteshini zokusebenza, emadeskini nasemakhishini.
● Ideski lasekhaya noma lokufundela umsebenzi / lasehhovisi - Ungasebenzisa ophakamisa izakhiwo ukwakha ideski lokuma lakho eliphakeme uma ufuna indawo enkulu yokusebenza.
● Itafula lokudlela lokuphakama eliguquguqukayo - Guqula itafula lakho elidala lokudla idina libe itafula elilungisiwe ukuphakama ukuvumela itafula elimi noma ikhawunta yeziphuzo ngokucindezela nje inkinobho. I-IPTT-DD iyindlela enhle kulabo ababheka umbono wokonga isikhala ngendlela encane. Uma usuqedile ngesidlo sakusihlwa somndeni, mane uphakamise itafula lokudlela elihamba ngezimoto ukuliguqula libe ibha yokuma.
● Ukukhuphuka kwentambo yekhofi - Njengethebula lokudlela elizenzakalelayo, ungasebenzisa isethi yethu yokuphakamisa ukwakha itafula lekhofi elibushelelezi futhi elisesitayeleni ngenhla ekhuphukayo. Iphezulu elikhuphukayo livumela itafula lekhofi elikhuphukela endaweni yokudlela, okwenza izivakashi zakho zikhethe phakathi kokuhlala noma ukuma. Ukuba namatafula ekhofi amaningi azenzakalelayo kuvumela inketho esheshayo yokonga isikhala lapho isitolo sixakeka kakhulu futhi singekho isikhala esanele sezihlalo.
I-IPTT-DD ingasetshenziswa kwezinye izimo eziningi, noma kuphi lapho ufuna khona.
Izici● Umbala: Umhlophe ngesiliva
● Usayizi wokufaka ofanele
● Ukumboza ngophawuda
Ithempelesha elisebenzayo: 0 ℃ ~ + 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
● Imvamisa yokusebenza: 10% max 2mins ukusetshenziswa okuqhubekayo
Langaphambilini IP-SJZ Electric Ukuphakamisa Ithebula
Isilinda Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, I-Forage Abavuni Actuator, Electric Linear Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator,